Warkii toddobaadkan ugu wanaagsanaa caalamka ee dad badan ka farxiyay |
Barafasoor Jean Jacques Muyembe, oo ah isuduwaha ka jawaabidda xaaladaha cudurka Ebola ee dalka DRC ayaa ku dhawaaqay arrintan, isagoo sheegay in dhawaan cudurka laga hortagi doona, lana daaweyn doona dadka uu ku dhaco, wuxuuna tijabada cusub ku tilmaamay “warka ugu wanaagsan sanadkan”.
“Aad ayaa ugu faraxsanahay arrintaas, waxaana 40 sano oo nolosheyda ka mid ah ka fikirayay sidii aan u daweyn lahaa caabuqa Ebola, marka tani waa guul aan gaaray”, ayuu yiri Jean oo la hadlayay BBC-da.
Qaar ka mid ah dadkii la siiyay dawada REGN-EB3 ee la sheegay inay daweyso Ebola, waxay ka faa’ideen in khatartooda ay hoos u dhacday 29 boqlkiiba, marka loo eego kuwii aan daawooyinka helin ee ay khatartoodu gaartay 60-67 boqolkiiba.
“Waa muhiim, sababtoo ah Ebola wax dawo ah malahan, wax talaal ahna na horay uma lahayn, marka tani waa war wanaagsan,” ayuu yiri Dr Muyembe.
“Waa in aan taxadarnaa, si aysan bukaanada gacanta ugu dhigin dawada dareeraha ah. Daweynta waa mid lagaga hortagayo caabuqa, mana ahan tallaal”, ayuu yiri.
Natiijada kama dambeysta ah ee dawooyiinka tijaabada ah ayaa la filayaa bilaha Septembar iyo Oktobar ee sannadkan. Khubarada caafimmaadka ayaa sidoo kale sheegay in helitaanka dawooyinka cusub ay gacan ka geysaneysan doonaan sidii loo joojin lahaa faafidda caabuqa oo fara ba’an ku haya dad badan oo ku nool qaaradda Afrika.
“Saameynta waa mid kheyrul caadi ah, sababtoo ah dadku way ka soo horjeesteen dawada cudurka Ebola, waxayna xarumaha lagu daaweeyo u aqoonsadeen inay yihiin meelo lagu dhinto,” Sidaas waxaa BBC-da u sheegay Dr Muyembe.
“Ma arki karaan dad halkas aadaya, ka dibna dib ugu laabanaya qoysaskooda iyo bulshadii ay ka yimaadeen, waxaa ugu wacan dawada la hirgeliyay, marka waa in meesha laga saraa qaabka uu cudurka ku faafi karo”, ayuu raaciyay.
“Ilaahay ba ku mahdinayaa”, ayay tiri, “waxan la xanuunsanaa cudurka Ebola, balse hadda waa la iga daweeyay, inkastoo ninkeyga uu u dhintay, sababtuna waxay ahayd in xarumaha lagu daweeyo cudurka la geeyay xilli dambe”.
Waxay intaas ku dartay in cudurka Ebola uu wali jiro, “jirkeyga ayaa ka dareemay cudurkan, waa dilaa balse si dhaqsi leh ayaa loo daweyn karaa.”
Dadka ayaa u dhinta in xubnaha jirka oo daciif noqda iyo fuuq bax ba’an.
Somalia Si Rasmiya U Shaacisay Qorsheyaashii Dhegaraysnaa ee lagu Marin…